Imtixaanka Shahaadiga ah ee wasaaradda Waxbarashada oo dib loo dhigay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in muddo 10 maalmood ah dib loo dhigay imtixaanka ardayda sanadkan ka qalinjibeneysa dugsiyada ee Muqdisho, oo markii hore loo qorsheeyey 30-ka May.
Wasiirka Waxbarshada iyo Taclinta Sare ee xukumada Soomaaliya, Khadra Bashiir Cali iyo Wasiiru ku-xigeenka, Xaamud Cali Xasan oo siwada Warbaahinta shirjaa’id maanta ugu qabtey maqaalada Muqdisho ayaa ka warbxiyay sida ay u socota is diiwaangelinta ardayda dugsiyada sare oo ay wado wasaaradda Waxbarashada ee ku aadan ka qeybgalka imtxixaanadka sanad dugsiyeeda 2014-2015.
Wasiire Ku-xigeenka Waxbarshada iyo Taclinta Sare, Xaamud Cali Xasan ayaa sheegay in xiligaan ay wasaaradu iska diiwaangeliyeen 4,500 oo arday oo diyaar u ah in ay ka qeyb qataan imtixaanka sanadkaan ee wasaaraddu mideysay.
“Waxaan maanta aad iyo aad ugu mahadnaqeyaa arday Soomaaliyeed maamulayaasha dugsiyada ee baaq aan u jeedinay ka soo jaawbay oo is xilqaamay, fikirdii wasaarada fahamay, maanta waxaan malayna iney is soo diiwaangeliyaan 4500 oo arday ah kuwaas oo uu diyaar u ah iney ka qeyb qaadaan imtixaanada dugsiga” ayuu yiri Xaamud Cali.
Wasiirka Waxbarashada, Khadara Bashir Cali ayaa iyaduna sheegtay in wasaaradu ay mudo 10 cisha ah ay ku dartay xiligii la qaadi lahaa imtixaanka maadaama ay wali socoto is diiwaangelinta ardayada Soomaaliyeed ee ku nool gobalada dalka, sida ay tiri.
“Waxaan rabaa in aan idin sheego waqti aan ku darnay waa 10 bari ah, maxaa yeelay waxaa hadda dirnay dokomintiyada ardayda gobollada” ayay tiri wasiir Khadara.
Imtixaankaan ay waddo wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa waxaa qaaddacay Dalladaha Waxbarashada Dalka, iyagoo u diiday sababo dhowr ah, sida amaanka, kalsoonida imtixaanka, iyo inuusan jirin manhaj mideysan oo ay dowladda Soomaaliya soo saartay oo loo dhigay ardayda oo dhan.
Arday badan ayaa la sheegay iney isu diiwaan geliyeen ka qeybgalka imtixaanka, iyadoo maamullada Iskuulladu ku jiha wareersan yihiin sida ay ka yeelayaan imtixaankaas.
Waxaa xusid mudan in dalladaha Waxbarashadu qaadeen Imtixaanka Shahaadiga ah, oo natiijooyinka ugu horreeyana la shaacin doono 28-ka bishaan May.
Wasaaradda Waxbarashada ayaa ku hanjabtay in ardaygii ka qeybgeli waaya imtixaanka mideysan uusan heli doonin Shahaadada Wasaaradda, taasoo arday badan ku kalliftay iney is diiwaan gelayaan, iyagoo hareer marayada dalladooda.